Kambodza any an-dranomasina
Ny toeram-ponenana any Kambodza dia manomboka mandresy ny fon'ny mpizaha tany. Kanefa, na dia eo aza ny fotodrafitr'ireo toerana ireo dia mbola eo amin'ny sehatra fampandrosoana, mbola azo atao tsara ny miala sasatra eto. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitantara aminareo momba ny toeram-ponenana malaza indrindra any Kambodza izahay.
Io no iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Kambodza. Ka dia nahavita ny fiainany fohy izy. Ny tanàna dia naorina tamin'ny taona 1950 ary niasa ho seranan-drano lalina. Nandritra ny taona 1990 dia nameno azy ny vahiny, nanomboka ny fanorenana hotely, toeram-pisakafoanana ary trano hafa ho an'ny mpanao vakansy. Amin'izao fotoana izao dia tsy hahita tsangambato ara-panatanjahan-tena sy ny tanàna mahaliana ianao. Sihanoukville no toeram-ponenana any Kambodza.
Ny torapasika eo an-toerana dia ara-bakiteny miaraka amin'ireo mpizaha tany. Betsaka amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, biraon'ny fizahan-tany no manome tolotra ny mpizahatany. Ny malaza indrindra, ary noho izany, ny toradrano maloto indrindra - Ochutel sy Serendipity. Amin'izy ireo dia tsy hahita fitsaharana milamina ianao. Misy ranomasina ny olona, ​​fialam-boly mihorakoraka sy alina. Ny rano madio dia hahafaly anao roa tora-pasika hafa - Otres sy Ream. Saingy eto dia misy ny fotodrafitrasa mivoatra kokoa noho ny teo aloha.
Ny mpandresy amin'ny anarana hoe "The most clean beach" dia azontsika atao ny milaza ny moron-drano Sokha, izay ny ankamaroany dia azo ampiasaina amin'ny vahiny avy ao amin'ny Sokha Beach Resort. Azonao atao ihany koa ny mangataka amin'ireo mpiambina mba hamela anao handeha eny amoron-dranomasina na hanararaotra ny ampahany amin'i Sokha izay natokana ho an'ny fampiasam-bahoaka.
Kep dia efa ela no noheverina fa tsara indrindra any Kambodza any an-dranomasina. Saingy rehefa nanomboka niroborobo ny Sihanoukville, ilay mpifaninana aminy voalohany dia lavo. Vao haingana dia nitombo indray ny fahalianan'ny mpizaha tany tamin'ity toerana tsy mahazatra ity. Nahoana no "tsy mahazatra"? Izy io dia mikasika ny torapasika eo an-toerana. Ny fasika eto dia mainty volokano, ary ny rano dia tena madio. Be dia be dia be ny mpizaha tany mpizaha tany Kepe, ka ity toerana ity dia toerana tsara hialana amin'ny hatezerana sy ny hirifirin'ny vahoaka.
Fahagagana hafa mahafinaritra, izay manomana an'ity toeram-pambolena ao Kambodza ho an'ny mpizaha tany rehetra ity - mahazatra ny sakafo any an-toerana. Momba ny sakafo avy amin'ny seafood, ary indrindra momba ny toetry ny krabs, voninahitra laza lavitra an'i Kep.
Kambodza dia ahitana nosy maromaro marobe, maro amin'ireo mpizahatany no malaza. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Kambodza eny amin'ny ranomasina ny nosy Koh Rong. Ny fasika maizim-bary, rano madio ary bata amin'ny endriky fo dia mahatonga ny toerana ho malaza. Ny Nosy Sun-Neil dia manana endrika hafa: afaka mandresy ny fonareo amin'ny rivotra mahafinaritra, ary ny nosy Koh Tan dia heverina ho mekka tena ho an'ny mpitaiza .
Laôsa - fomban-drazana sy fombafomba
Rivotra any Indonezia
Inona no hitondrana an'i Korea Atsimo?
Lalàna ao Japana
Fialantsasatra any Maldives
Inona no hitranga ao Singapore ao anatin'ny 2 andro?
Ahoana ny famonoana ny bitro?
Fifaninanana ho an'ny vehivavy eo amin'ny latabatra
Potato miaraka amin'ny chanterelles ao anaty vilany
Ny Tetezan'i Libenskiy
Ahoana ny fomba famindrana ny orkide phalaenopsis?
Dresses - Trends 2014
Trondro any anaty pita
Aiza no hankalaza ny fitsingerenan'ny zandriny?
Afaka mampinono ny kamboko amin'ny voankazo maina ve aho?
Hypotrophy amin'ny ankizy
Famantarana ny fanombohan'ny asa amin'ny fiterahana
Ny zanakavavin'i Kim Kardashian sy Kanye West dia ho lasa endrika ny fanangonana ny akanjon'ny ankizy
Solon'ny sela - fanatsarana sakafo
Trondro ho an'ny mpivady
Garuda ao amin'ny Mythology Slavonian sy ny Bodisma
Azo atao ve ny bevohoka amin'ny bata?
Hairstyle mody - fahavaratra 2015
Hipster ho an'ny tovovavy
Sakafo avy amin'ny haza
Atombohy amin'ny decoupage - kilasy Master